1954-1964 Evinrude 5.5 HP Seahorse Tne-UP Project sịlịnda Head Mmezi | Outboard Boat Motor Mmezi
1954-1964 Evinrude 5.5 HP Seahorse Tne-UP Project sịlịnda Head Mmezi
Ọ bụrụ na ị ketara otu n'ime ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ochie a ma ị maghị akụkọ ihe mere eme, ọ bụ ezi ihe ịdọpụta isi nke cylinder ma lee ihe dị n'okpuru. Wepu oghere ahụ. N'iji 7 / 16 sụgharịa, wepụ ihe nkedi iri ahụ na-ejide ya n'isi. Jiri nlezianya pry ka cylinder wepụ si na crankcase iji mebie akara nke isi mkpuchi isi.
Ị ga-eji dochie isi gasket na a ọhụrụ.
Head gasket Nọmba nke OMC 303438 NAPA / Sierra Part Number 18-2885
Ugbu a, isi isi cylinder ahụ apụ, ehichapụ, dị ọcha, ma nyochaa mgbidi galinda, pistons, na isi mmiri. Ọzọkwa, nyochaa akụkụ mmiri ndị dị gburugburu cylinders. Jiri nchara ikuku, kụọ ma hichaa ebe mmiri. Ana m eji obere waya waya ehichapụ carbon na pistons na n'ime mkpụrụ isi cylinder. Ejila kpochapụ a na-ehichapụ ya. Ọ bụrụ na ị na-ehichapụ anya ma na-agbada na metal, ị nwere ike ịmepụta "ebe dị ọkụ" na piston. Ị gaghị eme ka nke a dị ọcha. Ụfọdụ carbon dị nkịtị.
tupu nzacha na mkpocha
Mgbe nzacha na mkpocha
Otu n'ime isi ihe mere ị ga-eji wepu mkpụrụ isi cylinder iji chọpụta na isi adịghị. Ka oge na-aga, site na ikpo ọkụ ma dị jụụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ụgbọala ahụ na-ekpo ọkụ, isi mmiri ahụ nwere ike ịda. Ebe ọ bụ na m enweghị igwe igwe nri, naanị m na-etinye akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị mma na otu mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ihe dị larịị ma na-ebugharị mkpụrụ isi cylinder n'usoro okirikiri ruo mgbe elu ala ahụ dị larịị. Ị nwere ike ịkọ mgbe elu dị elu n'ihi na ị ga-enwe ọkwá na-egbuke egbuke n'ụzọ niile dị n'elu nke isi oche ahụ.
Jiri mmanu 2 kpoo mmanu isi mmanu ma mee ka okpueze ya laghachi n'elu ugbo agha. Oghere ndị dị na isi na cylinder adịghị anọkọtara na isi agaghị agaghachi n'ụzọ na-ezighi ezi. Ị nwere ike ịgbanwe ntụgharị isi 180 isi ma ọ bụrụ na ebuchi adịghị ka ọ ga-agbanye. Jide n'aka na ị gaghị agbanyekwuo ihe mkpuchi ahụ. Onye ọ bụla na-eche na isi ihe dị mkpa ga-esi ike. Nke a ga-akpụ isi. Ọzọ, naanị ka ejiri nkeji iri na ise gbanwee snug. Mgbe ị na-eme ka ebubo a dịkwuo mkpa, ịkwesịrị ịkwutụ ihe mkpuchi ihu nke ọ bụla maka ịdị ọcha ruo mgbe ịchọtara ha niile wee laghachi azụ ruo mgbe ị ga-eme ka ha niile sie ike nkeji iri na anọ na-agafe snug. N'ụzọ dị otú a, isi ga-etinye aka na ngọngọ.